Sirivha Lab: Imbwa Inobereka Ruzivo uye Muridzi Wenongedzo - Inobereka
Labrador Retrievers inogona kuuya nemavara mazhinji, asi wakamboona Sirivha Lab?
Sirivha Labs yakanaka slate grey Labrador inotora .
Ipo ivo vachiri vashoma kwazvo ivo vachiri nehumwe hwakafanana hushamwari uye hunhu hunhu hwemaRabhodhi akajairwa.
Iyo geni quirk uye ine nharo yekuzvara nhoroondo inoita kuti rudzi urwu rwusiyane kubva pamatatu akajairika maLab mavara (Nhema, Bhurawuni uye Yero).
Hupenyu hautombogunun'una neSilver Labs kutenderedza. Iwe unofunga iwe ungade imwe muhupenyu hwako?
Ramba uchiverenga kuti udzidze zvese zvaunoda kuti uzive nezve imbwa dzakanaka idzi ...
Sirivha Lab Pakutarisa
Saizvozvowo Inobereka kuSilver Labs
Sirivha Labrador Kuongorora
Zuva Muhupenyu HweMarabhorari eSirivha
Sirivha Labrador Nhoroondo Uye Chibviro
Sirivha Lab Temperament Uye Maitiro
Yakawanda Sei Inotora Sirivha Lab Inodhura?
Kuonekwa kwesirivha Lab
Sirivha Lab Kuchengeta Nhungamiro
Sirivha Lab Exercise
Sei Kudzidzisa Sirivha Labs
Sirivha Labs Pfupiso
Sirivheri Lab irudzi runodikanwa uye runoshanda nemoyo wegoridhe.
Iyo Sirivha Lab mutsauko wemuvara weiyo Chokoti Lab . Ivo vane iyo chaiyo chaiyo yekutamba hunhu hweyakajairika Labs uye gadzira yakanaka mhuri imbwa . Izvi kubereka vachada kuve pakati pekucherechedzwa uye kunyangwe kekutanga varidzi vekunakidzwa necha pooch inodikanwa iri nyore kudzidzisa nekutarisira.
Kuzivikanwa: # 1.
Kurema: 55-80 mapaundi.
Mutengo: $ 1000- $ 1500.
Unhu: Anobuda, anotamba uye anofara.
Mutengo : $ 750- $ 1200
Hupenyu Makore 11-14
Saizi : 55-88 mapaundi
Yadeurwa : Yakaderera-Pakati
Chiitiko : Kwakakwirira
Mutengo : $ 500- $ 1000
Hupenyu Makore 10-14
Saizi : 55-80 mapaundi
Yadeurwa : Pakati
Mutengo : $ 1000- $ 1500
Hupenyu : Makore 10-12
Iyo yakajairwa Retriever inouya mumitatu mvere dzemavara: Nhema, Yero uye Chokoreti.
Sirivha Labs inouya kubva ku yakawandisa dhizaini geni muChocolate Labs - izvi zvinoita kuti mvere dzadzo dzebhuruu dzioneke kunge ndedze grey kana bhuruu.
Nhoroondo imbwa idzi dzaishandiswa kutora nekutora shiri dzemhuka dzakavhimwa. Zvisinei ivo vava kunyanyo kuzivikanwa semhuri ine rudo kana imbwa dzebasa.
Zvimwe kunze kwemavara avo asina kujairika iyi imbwa yakangofanana chero imwe Lab.
Ivo vane hukama hwemhuri uye ane hushamwari hwakanyanya (ndoda kusvika pakanyanya kuvimba nevamwe).
Zuva ravo rese rinotarisana nekutandara nemitambo uye hapana chavanoda kunze kwekuva pakati pekucherechedzwa.
Kana iwe uchitsvaga yakanaka imbwa inoshanda iyo inoda kutariswa nevanhu saka, Sirivha Labs ndirwo rudzi rwako.
Zvinoshamisa hushamwari uye mhuri yakatarisana.
Dzakawanda dzinodiwa imbwa dzinoberekesa munyika.
Inowanikwa pamwe chete nemunhu wese.
Inoita yakanakira yekutamba yevana.
Kazhinji uye zvakaoma kuwana iri vara.
Inodhura zvakanyanya kupfuura mamwe marabhu emavara.
Inopokana pedigree uye chinzvimbo chekunyoresa.
Iine hupenyu hupfupi pane mamwe marabhu.
Mumangwanani-ngwanani sirivha yako Lab ichave yakamuka kwenguva refu alarm isati yarira. Ivo vachakuzivisa iwe kuti inguva yekumuka nekusvetukira kumusoro padivi pako uye uchikunanzva iwe kumeso kwako kwese!
Ukangomuka vachatarisira kuti iwe uvatungamirire kukicheni.
Mushure mekudya kwemangwanani ivo vanokutevera paunenge uchishambidzwa, wakapfeka uye wagadzirira zuva racho.
Ino inguva yekufamba kwavo kwemangwanani uye mamwe maLab Labs anokuzivisa iwe izvo nekukuunzira leash yavo.
Mushure mekufamba kwenguva refu kuburikidza nenzvimbo (kana paki) ivo vanozopeta mukati yavo kana iwe uchienda kunoshanda kwezuva racho. Kuvapa kufamba mangwanani ano ndiyo nzira yekugadzirisa.
Mwana wako anomirira nerunyararo mukati yavo kana iwe uchienda kubasa. Lab yakagadziriswa ichavata nguva iripo kudzamara wadzoka kumba uchibva kubasa. Ivo vanozotarisa pahwindo iwe uchifamba uchikwira kumusuwo uye ndokukwazisa iwe neshawa yeimbwanana kutsvoda uye mhuno yemhuno.
Iye zvino zvawave pamba inguva yako inofarira imbwa yezuva: nguva yekutamba!
Mutambo wekutora kana rwendo rwepaka imbwa zvese zvinokosheswa.
Zuva rega rega chiitiko cheSilver Labs, asi akanakisa ezuva nezuva anosanganisira kufamba uchitevedza mahombekombe, kana zuva rembwanana yekutamba neshamwari dzavo.
Mushure mekudya kwemanheru kumwe kufamba-famba padhuze nechavabatsira mhepo pasi kwezuva racho.
Usakanganwa kunyangwe iwo maSilver Labs achinakidzwa nekunyaradzwa kwemumba sekuda kwavo ivo vanofarira kunze kwekunze.
Kana yasvika nguva yekudzikisira pasi kwezuva ivo vanokumirira iwe kuti ubatanidze navo pasofa. Uye panguva yekurara shamwari yako yakatendeka inozvinyudza kumusoro kwetsoka dzemubhedha wako.
Yako Lab ichakupa iwe kutsvoda zvishoma husiku usati wavata. Mangwana rinenge riri rimwe zuva rakabatikana. Kana zuva rabuda, ivo vanenge vakagadzirira kuzviita zvakare.
Labrador inotora vanobva kuNewfoundland (Canada) uye vanodanwa mazita kudunhu riri pedyo reLabrador.
Zvisinei, mhedzisiro chaiyo yerudzi urwu ichiri kupokana zvakanyanya.
Izvo isu zvatinoziva ndezvekuti ivo vakafudzirwa kuve akakwana ekuvhima mudiwa uye mutambo shiri retriever. Ivo vakave kurovera nekukasira kana vachinge vaunzwa kune dzimwe nyika neChirungu muzana ramakore rechi19.
Muna 1917 maBlack nemaYellow Labs vese vakazivikanwa zviri pamutemo neAmerican Kennel Club.
Zvino mukutanga kwema1920 kuberekana kwakatanga kuburitsa sirivheri Lab.
Zvisinei ipapo ipapo iri vara rakanga riri pasi pekupokana kwakakomba.
Sirivha Lab Retrievers yakaverengerwa kubva kune isingafarirwe Chokoreti (kana chiropa) Rabhora rerudzi. Panguva ino Ruvara rweChocolate rakanga richiri kutorwa sekukanganisa nekuda kweyakawandisa mamiriro avo uye nekuwedzera kwavo kubata kumatambudziko ehutano.
Asi Ruvara rweSilver rwakatonyanya kupokana.
Panguva iyo vanhu vazhinji vakacherekedza yavo kufanana kune Weimaraner (mumwe Retriever weboka reMitambo). Zvaive zvichitaurwa kuti maSilver Labs ainyatso kungove maWeimaraner mahybridi pane imbwa dzakachena.
Vanobereka purists vakapokana zvakare kuti kuvapo kwejuzi rinodzvinyirira kwakabata rudzi rwembwa here kana kuti kwete. Imbwa ine majekiseni akasarudzika inganzi imbwa isina hunhu here?
Mukupedzisira, iyo American Kennel Club yakabvuma kuziva iro ruvara sechigadzirwa cheChocolate. Zvese sirivheri Labs zvinofanirwa kunyoreswa seChocolate kuti uwane AKC kuzivikanwa.
Nehurombo, gakava pamusoro pezera redzinza rinoenderera nanhasi.
Silver Labs haigone kukwikwidza muAKC imbwa inoratidza asi ivo vanokodzera kune zvimwe zviitiko zveAKC.
Nekuda kwekufanana kunoshamisa kwerudzi urwu kune Weimaraner, yaimbofungidzirwa kuti ndeye Weimaraner hybrid.
Sirivha Lab yakatanga kuburitswa muma1920s.
Mukati meyekutanga kwezana ramakumi maviri emakore chokoreti uye sirivheri mvere dzemavara dzaionekwa senge kukanganisa. Ipo ichiri ivo vanozivikanwa zvakanyanya izvozvi ivo vachiri akanyanya kuzivikanwa mvere dzemvere dzerudzi.
Sirivheri haisiri iyo yega isina kujairika ruvara rwehuswa mune yakajairwa Retriever. Iyo Red Fox Lab mitambo yakasviba yakasarudzika yeYero fur vara uye inotaridzika yatsvuka tsvuku.
Nhoroondo yavo yekudonha mushure memutambo shiri yakavaumba ivo mukushambira kunoshamisa. Hapana chinhu chinodiwa naLab sekunyudza mudziva pazuva rinopisa rezhizha.
Iyo yakasarudzika geni iyo Sirivhi Labs inotakura inogona zvakare kukonzera bhuruu grey mavara mune dzimwe mhando dzakadai seFrench Bulldogs nemaWeimaraners.
Yako Sirivhi Lab ichave shamwari yepamwoyo yawakambove nayo.
Izvi zvinoshamisa ane hushamwari uye ane simba pup ichatora moyo wemhuri yako yese pasina nguva.
Sirivha Labs vane mweya wesango unovaita vangangoita vanoshanda nguva dzose uye ivo vachazoda kushandisa yakawanda yezuva ravo vachitamba.
Kunyangwe varidzi vanobatikana kwazvo vanogona kuzviwana vaneta nekunopera kwezuva.
Nekudaro, kana imbwa yako yaita kurovedza muviri ivo vanozove vakadzikama uye vakapfava.
Chero muridzi weLab anoziva kungoita goofy uye pamusoro pembwa idzi dzinogona kuve. Ivo vanogara vachitsvaga chimwe chinhu chisina musoro kuti vachengetedze varidzi vadzo vafarire.
Kunyangwe pahunhu hwavo hweGoofball, maSilver Labs zvinoshamisa kunzwira tsitsi uye kunzwisisa kwemanzwiro evaridzi vavo.
Iwo avo manzwiro anowanzo teedzera iwo evanhu muhupenyu hwavo.
Yako Sirivha Lab uchaziva kana iwe uchifara , kusuruvara kana kutsamwa. Paunenge uri mune yakaipa mood ivo vanove ivo vekutanga kuyedza kukufadza iwe.
Rudzi urwu rwakanyanya kungwara kupfuura vazhinji vanozvigadzira kuti zvive izvo uye ndizvo zvinoita kuti zvive zvakanaka pakushanda. Kutora uye kutora ndiwo mutambo wavanofarira uye zvakare nzira yavo yavanofarira yekubatsira. Funga kukumbira pooch yako kuti utore zvinhu iwe kuti uchengete pfungwa dzavo dzakabatana.
Izvo zvinopera pasina kutaura kuti rudzi urwu runowirirana chaizvo nevana uye hunowanzo kuvaona sevanotamba navo padanho ravo.
Vanowirirana nedzimwe imbwa zvakare asi zvidhori zvinotakura dzinogona kunge dzakabviswa nehunhu hwavo hwekusagadzikana.
Ruvara urwu runoonekwa seruvara rweumbozha.
Pamusoro pezvo ishoma kwazvo uye yakaoma kuberekera.
Iko hakuna vimbiso yeiyo sanganisa recessive geni mune marara eembwanana. Kazhinji yenguva iyo Sirivhu Lab ndeye isingawanzo kuwanikwa mune Chokoreti kana Dema marara.
Zvese izvi zvinhu zvinopa kune iyo mbwanana mutengo wepamusoro mutengo - sirivha Lab puppy inodhura chero kupi pakati pe $ 1000 ne $ 1500.
Mbwanana $ 100- $ 1500
Mukuru $ 500- $ 750
Kugamuchirwa $ 200- $ 300
Sirivha Lab ichave inodhura kupfuura mamwe mavara akajairika, saka iwe uchafanirwa kubhajeta zvinoenderana. Tarisira kubhadhara chero kupi zvako kubva pamadhora chiuru kusvika pamadhora mazana mashanu embwa yako nyowani.
Ruvara urwu rwunonyanya kutarisana nezvinetso zvehutano kupfuura mamwe maLabhora ane mavara saka chirongwa chakanaka cheinishuwarenzi chakakosha kukoshesa kufunga.
Maitiro asina kufanira ekuberekesa akajairika kune akasarudzika mavara seizvi. Ita shuwa kuti uchenjere nemitengo inonzwika zvakanyanya kunaka kuti ive yechokwadi!
Kunyangwe kana zvichireva kubhadhara zvishoma zvishoma, kumbira chiputi chako chitupa uye mapepa. Iwe unoda kuve nechokwadi chekuti mwana wako ndizvo zvaunotarisira uye kuti vakachengetwa zvakanaka vachiri vadiki.
Imbwa hombe uye ine simba seiyi inogona kudya zvakanyanya - avhareji yechikafu mutengo weRabrador yakajairwa iri pakati pe $ 35 ne $ 60 pamwedzi.
Ita shuwa kuti imba yako ine nzvimbo yakakwana yekuwana pooch inoshanda. Kana iwe usina yako yadhi, iwe uchafanirwa kutora imbwa yako kupaki kuti ibudise simba rayo kweinenge awa zuva rega rega.
Chinhu chekutanga chauchacherekedza nezve rudzi urwu ndeche nguvo yavo inoshamisa yesirivha.
Iri jasi rakapfava kaviri inotaridzika kunge velvet uye inogona kunge iri slate grey kana yakasviba bhuru.
Kungofanana nemamwe maRabhani vane muviri wakasimba uye wakaonda wemumhanyi une nzeve refu dzedenga nemeso akapfava erima.
Imwe yeanotsanangudza maficha ndeye yavo yakatwasuka otter muswe. Uyu muswe unobvumira imbwa kufamba zvakachengeteka mumvura.
Izvo zvakavakirwa zvese zviri zviviri ivhu nemvura uye zvine marefu mhasuru makumbo anoitwa kuti amhanye uye kushambira.
Kana vakura zvakakwana vakomana vanozomira pakati pemasendimita makumi maviri nemaviri kusvika makumi maviri, nepo vasikana vachizopfupika pa21-23 inches inches.
Varume vacho vanenge vari pakati pe65-80 mapaundi uye vakadzi vacho vanenge vari pakati pe55-70 mapaundi.
Sirivha Lab inogona kuuya mumhando dzakasiyana dzakasiyana. Kazhinji iyo ndiro rakasungwa kana bhuruu grey asi rakasviba bhuruu ndeimwe mukana.
Jasi ravo rakatsetseka uye rinonzwa kunge velvet paunovarova.
Iyo zvakare haina mvura uye ichavadzivirira kubva kuchando.
Ese maLabhorabhuru esirivheri anofanirwa kunyoreswa seChocolate Labs kuitira kuti uwane kuzivikanwa kweAKC.
Sirivha Lab haibvunze zvakawanda.
Chekutanga varidzi venguva vanogona kuchengeta rudzi urwu vachipa ivo vanokwanisa kubata rudzi urwu rwakanyanya simba .
Kunze kwekuita kwavo kwakakwira chiitiko uye kudiwa kwekusimudzira kwepfungwa, izvo zvinodikanwa zverudzi zvakakosha kwazvo (kunyangwe vana vanogona kudzidza kutarisira imwe).
Kudyisa, kudzidzisa uye kushambidzika hazviendi zvakanyanya kupfuura izvo zvinoda imwe imbwa kuva noutano uye inofara. Hazvizotora nguva yakareba kuti shamwari yako nyowani yesirivheri ikwane mukati chaimo.
Iri rakakura kwazvo simba rekubereka rinoshandisa yakawanda yezuva rayo patsoka dzavo.
Ivo vanozoda kuve vachimhanya uye kusvetuka kweakawanda emaawa avo ekumuka.
Iwe unofanirwa kuvapa kanenge a nguva yakazara yekuita basa mazuva ese.
Kutora uye kushambira chero nzira dzeLab dzinodiwa dzekutamba. Mutambo wekutora mudziva unogona kugadzira zvimwe zvakanakisa zveSilver Labs.
Ivo zvakare vanonakidzwa nemitambo yekudzingirira uye vanogona kunyange kudzidza kutamba tag newe. Kanda bhora kana frisbee uye wovaona vachiibata kunze kwemhepo.
Zviitiko Zvezuva Nezuva: 60+ maminetsi.
Chaunofarira Chiitiko: Kutora
Kunyangwe imbwa iyi iine hupfupi furufu ivo havatariswe rudzi rwakaderera .
Kana iwe ukauya neiyi imbwa kumba iwe unofanirwa kutarisira kuona mashoma esirivhudzi bvudzi pasofa uye kapeti.
Iyo imbwa inodurura zvine mwero mukati megore rakawanda uye inoda kukwesha kamwe chete pasvondo.
Munguva yechirimo nekudonha ivo vanodonhedza vhudzi rakawanda kupfuura zvakajairwa sezvavanogadzirira yavo yenguva jasi. Munguva ino yekudonha mwaka uchafanirwa kuwedzera rimwe zuva rekutsvaira kuti uchengetedze mvere dzembwa yako dzakatsvinda uye dzakachena.
Kana pooch yako iri kushanda iwe kazhinji haufanire kutema nzara.
Ingova nechokwadi chekutarisa zvipikiri zvavo vhiki mbiri dzese. Iwe unofanirwa kungozvidzora kumashure kana ivo vari kutanga kukombama.
Pakupedzisira teerera mazino avo - kutarisirwa kwemazino chinhu chinowanzo kufuratirwa chekushambadzira imbwa.
Iwe unozofanirwa kukwesha mazino avo kamwechete pasvondo uye unokwanisa kuvakurudzira neinonaka inonhuhwirira yemazino.
Chinhu chakakosha kuziva nezve chekudyisa maSilver Labs ndechekuti izvo zvinovaka muviri zvinodiwa zvichasiyana nhanho dzakasiyana dzehupenyu hwavo.
Kamwe yakura zvakakwana Rabhor inoda mazana mazana masere kusvika mazana maviri emakoriori pazuva.
Unogona kuvapa chero mhando yepamusoro kibble.
Kana kana iwe uchida kuvapa chikafu chakanyorova kana chisina mbishi iwe unogona kutsiva imwe yekombe dzembwa dzako dzezuva nezuva dzebhibble netangi yechikafu chakanyorova kana cheka mbishi yehuku kana turkey.
Usambofa wakapa nyama yemombe kana nyama yenguruve imbwa.
Mapuroteni anofanirwa kuve nhamba yekutanga mune chero chikafu cheLab, ichiteverwa nemafuta ane hutano. Carbs inofanirwa kuve yekupedzisira pane irongwa.
Zvese zvinongedzo zvinofanirwa kubva kune zvakasikwa sosi pane zvekugadzira zvekuzadza.
Pamasvondo manomwe kusvika gumi nemaviri ekuberekwa mbwanana yako inofanira kuyera pakati pemapaundi gumi ne22.
Pakati pemasvondo gumi nemaviri nemwedzi mitanhatu vanozokura kusvika hafu yehuremu hwavo hwevakuru (~ 40 mapaundi).
Pamwedzi mitanhatu kusvika pamipfumbamwe zera mwana wako anove makota matatu enzira yekukura kwavo kwevakuru. Mbwanana pazera iri dzinorema pakati pemakumi mashanu nema65 mapaundi.
Negore regore imbwa yako ichave pahuremu hwayo hwakazara hwevanhu vakuru makumi mashanu nemashanu kusvika makumi masere mapaundi
Murume: 22-24 inches 65-80 mapaundi
Mukadzi: 21-23 inches 55-70 mapaundi
Sirivheri uye Chokoleti Labs zvinonyanya kubatwa nenzeve nzeve uye chirwere cheganda kupfuura icho mamwe mavara emvere .
Nzeve yekushambira (kana kunze otitis ) ndeimwe yematambudziko akajairwa enzeve.
Nzeve dzepuppy dzako dzinoyevedza dzinogona kubata mvura yakawanda ivo vachiri kushambira.
Iyi yakasviba mvura inogona kugara munzeve dzavo uye kukonzera hutachiona. Zviratidzo zvinosanganisira kutsvuka uye kusviba kweiyo nzeve canal, kuvaviwa uye kutenderera kutenderedza nzeve.
Misoro yemakemikari uye madonhwe enzeve anogona kupihwa kune akapfava makesi enzeve yekushambira. Kune akanyanya kuoma masvondo mashoma emishonga yekurwisa-kupisa inogona kudikanwa.
NemaSilver Labs unodawo kutarisa maronda anorwadza eganda anozivikanwa senzvimbo inopisa.
Izvi zvinogadzirwa imbwa painonanzva kana kunhonga panzvimbo yakakuvara yeganda. Kukuvara nguva dzose, kurumwa nezvipembenene uye kupisa kwezuva zvinogona kuita nzvimbo inopisa. Zvinowanzoonekwa paganda rembwa, uye zvinogona kucherechedzwa imbwa painonanzva kana kuruma panzvimbo.
Mishonga inorwisa-kupisa inowanzo bvisa dambudziko kumusoro chaiko asi mwana wako angangoda kupfeka koni kuvamisa vachinhonga ipapo.
Yakareba Rakareba Raki Rarama?
Zvinosuruvarisa kuti sirivheri uye chokoreti maLab haararame kwenguva yakareba sevamwe vatema uye vatema. Sirivha Lab inogara makore ari pakati pegumi kusvika gumi nemaviri.
Mbwanana yako inogona kunge yakasindimara kana iwe tanga kutanga kuvadzidzisa .
Nekudaro hazvizotora nguva yakareba kuti ivo vave mutezo wemitezo yemhuri!
Dambudziko rako hombe richange riri kukurudzira imbwa yakatsauswa iyo inongoda kutenderera.
Ratidza mbwanana yako kuti unofara sei pese pavanobudirira kuita kuraira kana kutevedzera zvawakarairwa - ichi ndicho chakanyanya kukurudzira imbwa iyo inongoda kukufadza.
Unogona shandisa zvakare kubata sezvo maLab anokurudzirwa zvakanyanya nekubata.
Usambofa wakaranga imbwa yako nekuda kwehunhu hwakaipa kana kukwidza izwi rako.
Hunhu hwavo husina kunaka kuyedza kuwana kutarisisa - nzira yakanakisa yekumisa izvi kusapa kutarisisa zvachose.
Kushamwaridzana kunofanirwa kutanga nemureri kwenguva refu usati waunza puppy yako kumba.
Tenga uchitenderedza mbwanana kindergartens usati waunza mwana wako kumba. Mwana wako anokwanisa kusangana neshamwari dzake dzekutanga ipapo uye nekudzidza kugarisana nevamwe.
Ingo rangarira iyi imbwa inofarira kuve inoshingairira uye nepfungwa inosimudzirwa.
Imbwa iri pasi pekusimudzira imbwa inozvibata inoparadza kuti izvivaraidze.
Iwe unogona kuchengeta pfungwa dzavo nemuviri zvichishanda nekuyedza matsva nemitambo mitsva mazuva ese.
Kutora ndiyo yakanakisa yekudzidzira mutambo kune chero Retriever - zvakare mukana wakanaka wekudzidzira kuteerera mirairo, senge kurisiya, kurisiya uye ugare.
Edza kushandisa toyi nyowani kutenderera yega yega yemutambo, pamwe nekuwedzera kureba kwekutora nekukanda kwese.
Kana iwe uchitsvaga iyo yakasarudzika furry shamwari ipapo iyo Silver Lab iri kunze uko yakamirira iwe.
Rudzi urwu rwakakodzera kune wese munhu.
Varidzi ve chero mararamiro ehupenyu uye hunyanzvi danho vanowana inoshamisa shamwari muSilver Labs.
Usanyengerwe nehunhu hwavo hwekuda.
Iyi ndeimwe yembwa dzakangwara kutenderera uye zuva rega rega iwe uchafanirwa kurovedza muviri wavo nepfungwa.
Kunyangwe hazvo paine vara, iyo Labrador Retriever inogara iri yekuwedzera yekuwedzera kune chero imba - iyo yakanaka sirivheri furha reSilver Lab ingori bhonasi yakawedzerwa!
Regai tizive chero mibvunzo mune ino chikamu chikamu ...
Pomsky: Zvese zvaunofanirwa Kuziva Nezve Iyi $ 5,000 Imbwa
mambo charles uye bichon musanganiswa
anogona goridhe retrievers kudya watermelon
tiger mutsetse weblue nose pitbull